မိဘနှစ်ပါးလုံးပြိုင်တူ ဆေးရုံတက်နေရ‌တာကြောင့် တလှည့်စီပြုစုနေရတဲ့ မင်းသားခန့်စည်သူ – Cele Zone
မိဘနှစ်ပါးလုံးပြိုင်တူ ဆေးရုံတက်နေရ‌တာကြောင့် တလှည့်စီပြုစုနေရတဲ့ မင်းသားခန့်စည်သူ
ပြည်တော်ချစ်မင်းသားချော အကယ်ဒမီခန့်စည်သူရဲ့ အမိအဖနှစ်ပါးစလုံးဟာ အခုအချိန်မှာဆိုရင် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေလျက်ရှိပါတယ်နော်။ မိဘနှစ်ပါစလုံးပြိုင်တူဆိုသလို ဆေးရုံတက်နေရတဲ့အတွက် ခန့်စည်သူကတော့ အဖေတလှည့်အမေတလှည့်နဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ လုပ်စရာရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုနားထားကာ အဖေနဲ့အမေကိုပဲ အနီးကပ်အချိန်ပေးဖြစ်နေပါတယ်။
ခန့်စည်သူဟာ အလှူအတန်းအရမ်းလည်းရက်ရောသလို သရုပ်ဆောင်လည်းအရမ်းကောင်းတဲ့ မင်းသားချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အကယ်ဒမီဆုကြီးတွေကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပဲဆွတ်ခူးရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အနုပညာလောကမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ပရိသတ်ပေါင်းများစွာရဲ့ အားပေးမှုတွေကိုလည်းတစ်ခဲနက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
ပထမတုန်းကတော့ မိခင်ဖြစ်သူသာ ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူကပါ ဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ” အမေတစ်လှည့် မပြီးခင် ခုတော့… အဖေတစ်လှည့် ပေါ့လေ။ ခန္ဓာရှိရင် ဝေဒနာရှိတယ်။(ဘဝရလာ ၊ခဏတာမှာ ကံတွေနိမ့်ကျ ၊ရှိတုံပါက ဘယရောဂါ ၊ဘုရားလည်းပြု သမားကုကာ ၊ဉာဏ်ကူပါမှ သက်သာပျောက်ကင်း ၊ရောဂါရှင်းစေ ကျေးဇူးရှင် အဖေနှင့်အမေ။) “ဆိုတဲ့Captionလေးနဲ့အတူ ဖခင်ဖြစ်သူကိုပြုစုပေးနေတဲ့ ခန့်စည်သူရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုစာမျက်နှာပေါ်တင်ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နော်။ ကဲ…. အလှူအတန်းလည်းရက်ရောပြီး သဘောလည်းကောင်းတဲ့ မင်းသားချောခန့်စည်သူရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလည်းအမြန်ဆုံးကျန်းမာရေးကောင်းလာဖို့ ဝိုင်း၀န်းဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါအုန်း CeleZoneချစ်ပရိသတ်တို့ရေ…
မိဘႏွစ္ပါးလုံးၿပိဳင္တူ ေဆး႐ုံတက္ေနရ‌တာေၾကာင့္ တလွည့္စီျပဳစုေနရတဲ့ မင္းသားခန႔္စည္သူ
ျပည္ေတာ္ခ်စ္မင္းသားေခ်ာ အကယ္ဒမီခန႔္စည္သူရဲ႕ အမိအဖႏွစ္ပါးစလုံးဟာ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနလ်က္ရွိပါတယ္ေနာ္။ မိဘႏွစ္ပါစလုံးၿပိဳင္တူဆိုသလို ေဆး႐ုံတက္ေနရတဲ့အတြက္ ခန႔္စည္သူကေတာ့ အေဖတလွည့္အေမတလွည့္နဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူဟာ လုပ္စရာရွိတာေတြအကုန္လုံးကိုနားထားကာ အေဖနဲ႔အေမကိုပဲ အနီးကပ္အခ်ိန္ေပးျဖစ္ေနပါတယ္။
ခန႔္စည္သူဟာ အလႉအတန္းအရမ္းလည္းရက္ေရာသလို သ႐ုပ္ေဆာင္လည္းအရမ္းေကာင္းတဲ့ မင္းသားေခ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကယ္ဒမီဆုႀကီးေတြကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ပဲဆြတ္ခူးရရွိထားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္အႏုပညာေလာကမွာ အခိုင္အမာေနရာယူထားႏိုင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အားေပးမႈေတြကိုလည္းတစ္ခဲနက္ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့သူတစ္ေယာက္ပါပဲ။
ပထမတုန္းကေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူသာ ေဆး႐ုံတက္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူေနခဲ့ရေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဖခင္ျဖစ္သူကပါ ေဆးကုသမႈခံယူေနခဲ့ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ” အေမတစ္လွည့္ မၿပီးခင္ ခုေတာ့… အေဖတစ္လွည့္ ေပါ့ေလ။ ခႏၶာရွိရင္ ေဝဒနာရွိတယ္။(ဘဝရလာ ၊ခဏတာမွာ ကံေတြနိမ့္က် ၊ရွိတုံပါက ဘယေရာဂါ ၊ဘုရားလည္းျပဳ သမားကုကာ ၊ဉာဏ္ကူပါမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ၊ေရာဂါရွင္းေစ ေက်းဇူးရွင္ အေဖႏွင့္အေမ။) “ဆိုတဲ့Captionေလးနဲ႔အတူ ဖခင္ျဖစ္သူကိုျပဳစုေပးေနတဲ့ ခန႔္စည္သူရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမႈစာမ်က္ႏွာေပၚတင္ထားခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ကဲ…. အလႉအတန္းလည္းရက္ေရာၿပီး သေဘာလည္းေကာင္းတဲ့ မင္းသားေခ်ာခန႔္စည္သူရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးလည္းအျမန္ဆုံးက်န္းမာေရးေကာင္းလာဖို႔ ဝိုင္း၀န္းဆုေတာင္းေပးလိုက္ၾကပါအုန္း CeleZoneခ်စ္ပရိသတ္တို႔ေရ…
အမေများနေ့မှာ သူ့ရဲ့မေမေနဲ့အတူ ကမ္ဘာပေါ်က အမေတွေအားလုံးအတွက် တောင်းဆုတွေချွေလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
Halloween Night မှာ ဝဝကစ်ကစ် တူမလေးတွေရဲ့ အကစွမ်းရည်တွေကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ ဆုပန်ထွာ
တောထဲမှာပဲရနိုင်တဲ့ သူမအကြိုက်ဆုံးမုန့်အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး